ကိုယ်ခန္ဓာ ပြန်ကောင်း လာခြင်း-MamyPoko Myanmar
ကိုယ်ခန္ဓာ ပြန်ကောင်း လာခြင်း
မီးဖွား ပြီးနောက် မိခင်၏ သားအိမ်နှင့် မျိုးဥအိမ် ပြန်လည်
ကောင်းမွန် ပြုလုပ်ခြင်း၊ သားဖွားစဉ် ယောနိ အဝကို ခွဲထားမှု၊
ဗိုက်ခွဲ မွေးထား မှု၏ အနာ ပြန်လည် ကျက်ရန်နှင့် ပတ်သက်
သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှုကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။
သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ် ပြန်ကောင်း လာဖို့ ဆိုသည်မှာ?
၁၀လကြာ ပြောင်းလဲ မှုတွေ ဖြစ်နေသည့် မိခင်၏ သားအိမ်
နှင့်မျိုးဥ အိမ်သည် မွေးဖွား ပြီးနောက် ၆ပတ်မှ ၈ပတ် အကြာ
လောက်၌ မူလ ပုံသဏ္ဍာန် ပြန်ဖြစ် သွားသည်။ အရင် ပုံစံသို့ ပြန်သွား ခြင်းက ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲ သွားလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ကြည့် ရအောင်။
ဘယ်လို လုပ်ရင် သားအိမ် အရင်တိုင်း ပြန်ဖြစ် မှာလဲ?
မီးမဖွား ခင်၌ ချက်အပေါ် အထိ ရောက်နေသော သားအိမ်က
အချင်း ထွက်လာလျှင် တကြိမ်တော့ ချက်အောက် အထိ ရုတ်တရက် ကျုံ့သွားမည်။ နောက်တ ရက်၌ နောက်တကြိမ်
ချက်နား အထိ ပြန်ရောက် သွား၍ ထို့နောက်လည်း ထပ်ခါ
ထပ်ခါ ဒီအတိုင်း ဖြစ်ရင်း နဲ့ပဲ သေးငယ် သွားမည်။ မီးဖွား ပြီးစ ၅ရက် လောက်တွင် အပြင်က စမ်းကြည့်လျှင် သိနိုင် သော
အခြေ အနေ ဖြစ်ပေမဲ့ ၁၀ရက် လောက်ကြာ လာလျှင်
စမ်းကြည့်လည်း မသိ နိုင်သည့် အခြေ အနေထိ သေးငယ် သွားမည်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝကို ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ အထိ ကတော့ ၆~၈ လလောက် ကြာမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် ထိုအချိန် အထိကို ကိုယ့်ခ န္ဓာကိုယ် အခြေ အနေကို လိုက်ပြီး
မဖြစ် နိုင်သည့် ကိစ္စ များကို မလုပ်ပဲ နေထိုင်ပါ။
မွေးဖွား ပြီးနောက် နာကျင် မှုဆိုတာ ဘာလဲ?
သားအိမ် ကျုံ့သွား သည်နှင့် အမျှ မီးဖွား ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ် သော နာကျင် မှုမျိုး ခံစား ရပြီး ထိုအ ရာကို ""မီးဖွားပြီး နာကျင်မှု"" ဟုခေါ်သည်။ နာကျင် မှုကို ခံစား ရပုံက တဦးနှင့်
တဦး မတူညီ ပေမဲ့လည်း မီးဖွားချိန် နာကျင် မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ် လျှင် အရမ်းကို သေးငယ်သည့် အတွက် စိတ်အေးအေး
ထားပါ။ ရာသီ လာစဉ် နာကျင် မှုထက် အနည်းငယ် ပိုသည့်
နာကျင် ခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ မီးဖွား ပြီးနောက် ၂~၃ရက် အထိ နာကျင်မှု ဝေဒ နာကို ခံစား ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဆေးရုံက ဆင်းချိန်
လောက်ဆို ရင်တော့ မခံစား ရသလောက် ဖြစ်သွား ပါပြီ။
မီးဖွားပြီး သွေးဆင်းခြင်းက ဘာလဲ?
မီးဖွား ပြီးနောက် အချင်း ကွာကျသည့် နေရာနှင့် မျိုးဥ အမြှေး
ကွာကျ၍ သားအိမ်၌ ဖြစ်ပေါ် လာသော အနာမှ သွေးထွက် ခြင်း၊ သားအိမ်တွင် ပိတ်နေသည့် သွေးနှင့် စိမ့်ထွက် လာသည့် အရာ၊ ပစ်ချွဲချွဲ အရည်များ ပေါင်းစပ် ထားသော အရာကို အဖြူ ဆင်းခြင်း ဟုခေါ် ပါသည်။
ဒီသွေးဆင်း မှုက ဘယ်အထိ ဆက်ဖြစ် မှာလဲ?
မီးဖွားပြီး ၂~၃ ရက်သည် ပမာဏ များပြီး သွေးနှင့် တူသည်။
အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်း၌ သားအိမ်နှင့် မွေးလမ်းကြောင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာခြင်းနှင့် တပြိုင်နက် သွေးထွက်ခြင်း နည်းသွား
ပြီး အနီမှ နီကျင်ကျင်၊ အဝါရောင်၊ အဖြူရောင် ဆိုပြီး ပြောင်း
မီးဖွား ပြီးနောက် သွေးဆင်း မှုသည် သားအိမ် ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာခြင်း မလာ ခြင်း၏ အရေး ကြီးသည့် လက္ခ
ဏာ ဖြစ်၏။ အရောင်နှင့် ပမာဏ ပြောင်းလဲ မှုကိုလည်း စစ်ဆေး ကြည့်ရအောင်။ အမြဲတမ်း အနီ ရောင်သွေး ဆက်
လက် ဆင်းမှု သွေးဆင်းမှု နည်းသွား တာကနေ ရုတ်တရက် မြင့်တက် လာမှု၊ သွေးခဲ ဆင်းခြင်း အစ ရှိသော စိတ်ထဲမှာ မသင်္ကာ စရာ ကိစ္စ များ ဖြစ်ပေါ် လာလျှင် အမြန်ဆုံး စစ်ဆေး ကြည့်ပါ။
ပုံမှန် အားဖြင့် မီးဖွားပြီး ၄~၅လ နောက်ပိုင်း လို့ပြောကြ ပေမဲ့လည်း တဦးနှင့် တဦး ကွာခြားချက် ကြီးသောကြောင့်
ကိုးကား ရုံပဲ ကိုးကားပါ။ မိခင်နို့ တိုက်သည့် မိခင်က ရာသီ
သွေးပြန် ဆင်းတာ ပိုနောက် ကျပုံ ရပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအရာ တွင်လည်း တဦးနှင့် တဦး ကွာခြားချက် ကြီးမားပြီး မိခင်နို့
တိုက်နေ ပေမဲ့လည်း စောစော ဆင်းသည့် သူလည်း ရှိသော
ကြောင့် အားလုံး ကိုတော့ မဆို လိုပါ။ ရာသီသွေး ဆင်းခြင်း မရှိ ပေမဲ့လည်း မျိုးဥ ကတော့ ကြွေနေ သောကြောင့် သန္ဓေ တားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောရ ရင်တော့ ရာသီသွေး
မဆင်း ပေမဲ့လည်း သတိထား နေတာ ပိုကောင်း ပါမည်။
မီးဖွား ပြီးနောက် နေပုံ ထိုင်ပုံ
မီးဖွားခြင်း ဆိုသည့် ကြီးမားသော အလုပ် တာဝန် တခု ပြီးဆုံး
သွားသော မိခင် တယောက်၏ ကိုယ်ခ န္ဓာသည် ချက်ချင်း ကတော့ နဂို အတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်ပါ။
အခုမှ စပြီးလည်း ကလေးအား ပြုစု စောင့်ရှောက် မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်စရာ ရှိသောကြောင့် ဂရုတစိုက် နေပြီး မဖြစ် နိုင်တာကို မလုပ်ပဲ နေထိုင် သွားပါ။
တလပြည့် ပြန်စစ်ဆေးတဲ့ အထိ လုံလောက်သော အနားယူမှုကို
<pထင်မထား လောက်အောင် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်
လာသည်လို့ စိတ်ထဲ ထင်ပေ မဲ့လည်း မီးဖွားပြီး တလ
လောက် က ကလေးငယ် ကိုပဲ ပြုစု စောင့်ရှောက် ပေးပြီး
ကိုယ်ခန္ဓာ ကိုအနား ပေးကြ ရအောင်။ ဒီအ ချိန်၌ အလွန်
အကျွံ လုပ်လျှင် နောက်ပိုင်း အထိ အဲ့ဒီ အကျိုး ဆက်ကို
အချိန် အတော်ကြာ ခံစား ရမည်။ အိမ် အလုပ်ကို ကလေး အဖေနှင့် မိဘများကို အကူ အညီ တောင်းခြင်းက အကောင်း
ဆုံးဖြစ်၏။ ပတ်ဝန်းကျင် အကူ အညီကို ယူဖို့ ခက်သည့် အခါ postpartum helper အစ ရှိသော support service ကို အသုံး ပြု၍ မိခင်ကို အိပ်ရာ ထဲမှာပဲ နေခိုင်း စေချင် ပါသည်။
မီးဖွား ပြီးနောက် တလရဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး မှု၌ မိခင်၏ ယောနိ အဝကို ခွဲထားသည့် ဒဏ်ရာ၊ သားအိမ် ပြန်လည်
ကောင်းမွန်မှု အခြေ အနေ များကို စစ်ဆေး ကြည့်မည်။ ထိုအချိန် ဆရာဝန် ဆီမှ ပြဿနာ မရှိ ပါလို့ ပြောလျှင် ကာမ ပြန်လည် ဆက်ဆံလည်း ကိစ္စ မရှိ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သားအိမ်
လမ်းကြောင်းရှိ အမြှေး ပါးသည် ဒဏ်ရာ ရလွယ် သော
ကြောင့် သန့်ရှင်း မှုကို ဦးစား ပေးပြီး မဖြစ် နိုင်တာကို မလုပ်ပဲ
ကြင်နာ စွာဖြင့်။ အထူး ပြုလုပ် ထားသော ဂျယ်လီကို အသုံး ပြုရန် လည်း တိုက်တွန်း ပါသည်။ ချွင်းချက် အနေဖြင့် မိခင်၏ ကိုယ်ခ န္ဓာက လုံးဝကို နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ရန် အချိန် တနှစ်ကြာမည်လို့ ပြောကြ ပါသည်။ မိခင်အား ဝန်ထုတ် ဝန်ပိုး မဖြစ် ဖို့ရန် စဉ်းစား ပေးမည် ဆိုလျှင် အတတ် နိုင်ဆုံး ထိုအ
ချိန် အတွင်း ကိုယ်ဝန် မဆောင်တာ ကောင်းလိမ့်မည်။
အနာက ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲ?
ယောနိ ဆိုသည်မှာ အရမ်းကို နူးညံ့သည့် နေရာ ဖြစ်သော ကြောင့် ဘယ်လို ကုသမှု မျိုးကို လုပ်ပေး မှာလဲ၊ နာကျင် မှုက ဘယ်တော့ထိ ဆက်ဖြစ် မှာလဲ ဆိုသည်ကို သောက ဖြစ်နေ မှာပါ။
ယောနိ အဝကို ခွဲထား ခြင်းနှင့် ယောနိကို ဆုတ်ဖြဲ ခဲ့သည့် အခါရဲ့ ဒဏ်ရာသည် မီးဖွား ပြီးနောက်တွင် ကျက်သွားမည်။
အပ်ချည်ကြိုး ဖြည်ဖို့ရန် မလို အပ်သော ပျော်ဝင် နိုင်သော
အပ်ချည် ကြိုးကို အသုံး ပြုသည့် အခါလည်း ရှိ၏။ အပ်ချည် ကြိုးဖြည်ရန် လိုအပ်သည့် အခါ၌ ဆေးရုံ မဆင်းခင် ရက်တွင် ဖြည်ပေး သည်က များ၏။ အိမ်သာ တက်သည့် အခါ၌
အားစိုက် လွန်းပြီး အနာက ပွင့်ထွက် စရာ မရှိ သောကြောင့်
စိတ်အေးအေး ထားပါ။ ခြွင်းချက် အနေဖြင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်
လျှင် ဒုက္ခ ဖြစ်စေမည့် အကြောင်း တရပ် ဖြစ်သောကြောင့်
သန့်စင်သော ချည်ထည်ဖြင့် သုတ်၍ သန့်ရှင်းစွာ ထားဖို
နဂို အတိုင်း မြန်မြန် ဆန်ဆန် ပြန်ဖြစ်ဖို့ ကလည်း တဦးနှင့် တဦး မတူ သော်လည်း ဆေးရုံက ဆင်း၍ တပတ်လောက် ကြာလျှင် တော်တော်လေး ကောင်းလာပြီး မီးဖွားပြီး တလ
လောက် မှာပဲ နာကျင်မှု ပျောက်ကင်း သလောက် နီးပါး ဖြစ်လာမည်။ ယောနိ ပြဲတာနှင့် ယှဉ်လျှင် ယောနိ ခွဲထား
သည့် ဒဏ်ရာက နဂို အ တိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ မြန်ပါသည်။
ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပြင်းထန်သည့် နာကျင်မှု၊ တင်းမာ နေသည့် ခံစား ချက်များ ဖြစ်ပေါ်သော အခါ သားဖွား မီးယပ် ဌာနသို
သွားရောက် ဆွေးနွေး ကြပါ။
<pဗိုက်ခွဲ မွေးဖွား ခြင်းသည် ပထမဆုံး အကြိမ် ခွဲစိတ်မှု ဆိုပြီး ပြောသော မိခင် များလည်း မနည်းပါ။
ဗိုက်ခွဲ ပြီးနောက် ဒဏ်ရာ ဘယ်လို ပြန်လည် ကောင်းမွန် သွားမှာ ပါလဲ။
ဒဏ်ရာ၊ နာကျင်မှု နှင့်ပတ် သက်ပြီး ကြည့်ကြည့် ရအောင်။
ဒဏ်ရာ ကုသ ပုံက ဆေးခန်း ပေါ်မူ တည်ပြီး ကွာခြား ပါသည်။
နာကျင်မှုက ဘယ်အထိ ဆက်ဖြစ် နေမှာလဲ?
ခွဲစိတ် ပြီးနောက် ၁ရက် ၂ရက် ကတော့ အနာရဲ့ နာကျင် မှုနှင့် သားအိမ် ကျုံ့ခြင်းကြောင့် နာကျင်မှု နှစ်ခု ထပ်သွားပြီး ပြင်းထန်သော နာကျင် မှုကို ခံစား ရခြင်း များလည်း ရှိသည်။
နာကျင်မှု ပြင်းထန်လျှင် ဆေးရုံကို ပြောပြီး ဆေးရယူပါ။
၃ရက်မြောက် မှစပြီး ရိုးရိုး မွေးသော မိခင်များ နည်းတူ
လှုပ်ရှား လာနိုင်မည်။ နာကျင် မှုက ဘယ်တော့ထိ ဆက်ဖြစ်
မလဲ ဆိုတာ ကတော့ တဦး နှင့်တဦး ကွာခြားမှု ရှိပေမဲ့ မီးဖွား
ပြီးနောက် ၂ပတ် ကြာလောက် မှာပဲ ပြင်းထန်သော နာကျင်မှု
မရှိ တော့ပဲ တဖြေးဖြေး နှင့် တည့်ငြိမ် လာပါမည်။ ထို့နောက်
မှာလည်း အနာမှ ယားယံခြင်း၊ ရာသီ ဥတု ဆိုးရွား သောနေ
မှာ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် နာကျင်မှု ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းလည်း
အနာရွတ် ထင်ကျန် ခြင်းက ဗိုက်ခွဲပုံ ခွဲနည်း ပေါ်မူ တည်ပြီး
မတူ ပါဘူး။ ဒေါင်လိုက် ခွဲခြင်းက ကလေး မွေးဖွား ပြီးအထိ
အချိန် တိုပြီး ဆရာဝန် ခွဲစိတ်ပြီး မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း ကျယ်ပြီး
ကလေး ထုတ်ရ လွယ်ကူတယ် ဆိုတဲ့ ကောင်းသော အချက်
ရှိပေမဲ့ အနာရွတ် ထင်ကျန် လွယ်ပြီး၊ ဘေးတိုက် ခွဲခြင်းက
အနာရွတ် ထင်ကျန်ဖို့ ခက်ခဲ ပါသည်။
တဖန် တယောက်နှင့် တယောက် မတူပဲ အနာ ဝမှ အရေပြား
နီလာ ခြင်းများ ရှိသည့် အခါ (Keloid shape) လည်း ၇ှိသော
ကြောင့် ကာကွယ် ဖို့အတွက် တိပ်၊ ခရင်မ် အစ ရှိသည်တို
ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အနာရွတ်
ထင်ကျန် ခဲ့မလည်း ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ခ န္ဓာကိုယ် အသား
အရပေါ် မူတည် တာများ သောကြောင့် အနာ ရွတ်ကျန်
မှာဆိုးလျှင် ပလက် စတစ် ဆာဂျရီ အထူးကု (သို့) အရေပြား
အထူးကု များနှင့် ဆွေးနွေး တာကောင်း ပါတယ်။
<pလေ့ကျင့် ခန်းလို့ ကြားတာနှင့် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်လို့ ထင်ကြ ပင်မဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ လေ့ကျင့်ခန်းသည် အိပ်ရင်းနှင့် ခြေဖျားကို လှူပ်ရှားခြင်း စသော ပေ့ါပါးသည့် လေ့ကျင့် ခန်းကနေ နည်းနည်းဆီ လေ့ကျင်ခန်း ပမဏကို တိုးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခ န္ဓာကို ညှင်သာစွာ လုပ်ပေးသည့် လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်သည်။
<pမွေးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာ နားနေသည့် အချိန်မှာ တတ်နိုင် သမျှ လှုပ်လှုပ် ရှားရှား မနေသင့် ပင်မဲ့ လုးံဝ မလှုပ် ရှားခြင်း ကလဲ ပြန်လည် ကောင်းမွန်ရန် နှောင့်နှေး စေသော
အကြောင်း အရာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ လေ့ကျင့် ခန်းသည်
မွေးဖွား ပြီးနောက် ချက်ချင်း စတင် နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်သည်။ စောင်ထဲ မှာတောင် ပုံမှန် လုပ်နိုင်သည့် ပေါ့ပါး သော လေ့ကျင့် ခန်းဖြစ်၍ အမျိုး မျိုးသော ရလဒ်ကို မျှော်လင့်
★ ကိုယ်ခန္ဓာ စတိုင် ကျကျ ပြန်ဖြစ်ရန် အတွက် လေ့ကျင့် ခန်း၏ ရည်ရွယ် ချက်နှင့် နည်းလမ်းသည် မတူညီကြပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ နဂို ပုံစံ ပြန်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့် ခန်းသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်သည့် အခါမှ လုပ်ကြ ရအောင်။
<pမွေးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်ရန် အမျိုး
မျိုးသော ရလဒ် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင် ခြင်းကို ကိုယ်ခန္ဓာ လေ့ကျင့် ခန်းဟု ခေါ်သည်။
၁. ကလေး မွေးပြီး သွေးဆင်း ကောင်းအောင် ပြုလုပ်
၂. ကိုယ်ဝန် ဆောင်ခြင်း၊ မွေးဖွား ခြင်းကြောင့် လျော့သွား
သည့် ကြွက်သား များကို တင်းအောင် လုပ်ပေးသည်။
၃. မွေးဖွား မှုကြောင့် ပင်ပန်း မှုကို မြန်မြန် ကောင်းအောင် ပြုလုပ် ပေးမည်။
၄. နို့ထွက် ခြင်းကို ကောင်းအောင် ပြုလုပ် ပေးသည့် ရလဒ်၊
၅. ဝမ်းချုပ် ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ် ပေးသည်။
၆. သားအိမ် ကျုံ့ခြင်းနှင့် တင်ပါး ဆုံရိုး တောင့်တင်း ရန်လည်း ကာကွယ် ပေးသည်။
၇. ကိုယ်ခ န္ဓာကို လှုပ်ရှား ခြင်းဖြင့် စိတ် အပြောင်း အလဲ ဖြစ်လာ နိုင်သည်။
မွေးဖွား ပြီးနောက် အထူး သဖြင့် ဘာပြဿ နာမှ မရှိ ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ နေ့က စပြီး စတင် နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည်
မွေးဖွားသည့် လမ်းစဉ်နှင့် အမေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ်မှာ မူတည်သည့် အတွက် သားဖွား ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းနှင့် တိုင်ပင်၍
ကိုယ်ခန္ဓာ လေ့ကျင်ခန်း ပြုလုပ် သည့်အခါ ကြိုတင်
သတိ ပြုရမည့် အချက်
ကိုယ်ခ န္ဓာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် မှုမှာလည်း ထိရောက်မှု
ရှိသောကြောင့် တတ်နိုင် သမျှ လုပ်စေ ချင်သော်လဲ မဖြစ် မနေ လုပ်ရမည် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ အခြေ အနေ မကောင်း
ရင် ပင်ပန်း နေခဲ့ရင် အတင်း မလုပ်ဘဲ ရပ်လိုက်ပါ။ အစာ
စားပြီး နောက်နှင့် အိပ်ချင် နေသည့် အခါ အော်လိုက် ခြင်းက
ကောင်း၏။ မလုပ် နိုင်ပဲ အကြိမ် အရေ အတွက် များများ လုပ်ဖို့ မလို အပ်ပါ။
နေ့စဉ် ဘယ်သူ မဆို လုပ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့် ခန်းလောက်ဖြစ်သည့် လမ်းလျှောက်ခြင်း။ မွေးပြီးနောက် ခါးကုန်းပြီး ကလေးကို ကြည့်ရ ချိန်များ၍ တွဲကျ နေသော ဗိုက်သည် အသား ကျလာမည်။ကျောရိုးကို သေချာ ဖြောင့်မတ် စွာထား
ပြီး လမ်းလျှောက် ခြင်းမှ စတာ ကောင်းမည်။ နည်းနည်းလေး
စိတ်ထဲမှာ ထစ်နေလျှင် သားဖွား ဆရာ ဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။